Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xalay shaaciyey inuu qorshaynayey inuu maanta xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweynayaasha Maraykanka uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo ergo ka socota ururka Taalibaan.
Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaas joojiyey sababtoo ah markii ay soo baxday in Taalibaanku ay sheegteen mas’uuliyadda qarax toddobaadki hore ka dhacay magaalada Kabul oo dadka ku dhintay uu ka mid ahaa askari u dhashay Maraykanka. Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu hakiyey wadahadalladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala waday Taliban.
Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wararkan ku saabsan Afghanistan ka waraystay Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimahaqaaridda Aasiya aqoon u leh, kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horrayna waxa uu ku jawaabayaa su’aal ku saabsan heerarka ay soo mareen wadahadallada Maraykanka iyo Taliban.
Dhageyso Shirka Taliban iyo Maraykanka